EMUI 9.1: Ny vaovao rehetra momba ny sosona fanaingoana vaovao | Androidsis
Vao herinandro mahery izay Huawei dia nanamafy ny telefaona iza izy ireo no ho voalohany mandray EMUI 9.1 Ity no kinova vaovao an'ny sosona marika. Fampivoarana vaovao navoaka voalohany ho an'ny telefaona finday avo lenta avy amin'ny Huawei sy Honor. Na dia mandritra ny herinandro aza, mandritra ity volana ity dia hivelatra amin'ny telefaona bebe kokoa izy io.
Hatramin'izao dia tsy fantatra inona ireo fiasa vaovao hampidirina ao amin'ny EMUI 9.1. Soa ihany fa efa manana ny valiny amin'ity lafiny ity isika. Ny fanovana izay ampidirina ao amin'ity kinova vaovao ity an'ny sosona fanaingoana ny marika sinoa dia efa nambara. Dia lazainay anao eto ambany daholo ny zavatra rehetra.
Efa natomboka tany Sina ny fametrahana azy. Noho izany dia olana ny fotoana alohan'ny mpampiasa any Eropa miaraka amin'ny telefaona Honor sy Huawei izay hanana fidirana efa nahazo io kinova io. Ny orinasa mihitsy no nanamafy fa ny volana jolay dia havoaka ny fanavaozana. Ka resaka fotoana io.
Inona no vaovao ao amin'ny EMUI 9.1
Misy fiasa vaovao tena lehibe maromaro ao amin'ny EMUI 9.1, toy ny fampidirana ny GPU Turbo 3. Saingy tsy io fanovana io ihany no azontsika antenaina amin'ity andiany vaovao ity amin'ny firafitry ny marika Sinoa. Izy ireo dia efa afaka nahafantatra ireo fiasa vaovao na fanovana nampidirina tao. Ireto misy toy izao:
Fiaviana sy lohahevitra vaovao: Lohahevitra vaovao no ampidirina, ny fiaviana sy ny kisary dia nohavaozina ho an'ny fampiharana. Misy ihany koa ny fanovana sy ny ringtone vaovao ary ny fanairana.
Digital Wellbeing: Huawei dia mampiditra an'ity endri-javatra ity amin'ny EMUI 9.1. Noho io fampiasa io dia afaka mifehy ny fotoana hampiasantsika ny findaintsika isan'andro isika, ankoatry ny fahaizana mamaritra fetra raha toa ka heverintsika fa mampiasa azy io loatra isika.
Volavola marani-tsaina: Fandraisana tsotra kokoa hampiasana mpampiasa no entina. Noho izany, voamarina fa misy ny dingana eo anelanelany izay hofoanana, hahafahana manao hetsika haingana kokoa.
HiVoice nohatsaraina: Ny fanekena ny feo amin'ny telefaona dia havaozina amin'ity kinova vaovao ity. Amin'izany fomba izany dia ho azo atao ny mampavitroka fiasa sasany amin'ny telefaona amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo. Function toy ny scan ny kaody QR na ny fanaovana selfie.
Mpitantana tenimiafina: Ilaina amin'ny Android ankehitriny ny mpitantana ny teny miafina. Noho izany, miaraka amin'ny EMUI 9.1 dia mahita mpitantana vaovao izahay, noho izany dia afaka mitahiry sy mitantana haingana ny firaketana an-tsoratra izahay.
Fanatsarana ny tena zava-misy: Mahita andiana fiasa vaovao miompana amin'ny zava-misy marobe izahay, hanitarana ireo safidin'ny fakantsary. Ohatra, afaka manondro sakafo iray isika ary holazaina amintsika hoe firy ny kaloria ananany. Ho fanampin'izay, afaka manana vaovao momba ny zavatra isika rehefa mikendry, mitovy amin'ny ataon'ny Google Lens.
Mihatsara ny filaminana: EMUI 9.1 koa dia manolotra fanatsarana amin'ny fiarovana azy. Amin'ity tranga ity dia ny rafitra ihany no hamaky ireo rindranasa napetraka sy ireo izay hapetrakay. Amin'ireto dingana ireto dia azonao antoka fa azo antoka izy ireo. Raha sendra loza mety hitranga dia ampitandremana isika ary omena ny fahafaha-manakana ireo fampiharana ireo.
Huawei Share OneHop: Fiasa noforonina hanamorana ny fifandraisana eo anelanelan'ny PC (ho an'ny Huawei MateBook ihany izao) ary telefaona Huawei sy Honor. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny mamindra rakitra haingana dia haingana, hatramin'ny hafainganam-pandeha 30MB / s.
Torohevitra sy torohevitra mahomby: Ao amin'ny EMUI 9.1 dia hanana toro-hevitra amin'ny fampiasana ny telefaona nomen'ilay rafitra ihany isika. Mampahatsiahy antsika ny sasany amin'ireo lahasa na anjara asa misy izany, ary koa manoro hevitra ny hanandramantsika ny sasany amin'ireo fiasa vaovao. Hianaranao koa amin'ny fampiasana isan'andro ny telefaona, ka hanome torohevitra sy fika hanatanterahana asa sasany izay matetika ataontsika haingana kokoa.
Nanambara ny lisitry ny telefaona izay hanavao ny EMUI 9.1
Araka ny hitanao izao, EMUI 9.1 tonga miaraka amin'ny endri-javatra vaovao maro ho an'ireo mpampiasa manana telefaona Huawei sy Honor. Ankehitriny, ny miandry fotsiny ny famoahana ny fanavaozana amin'ny fotoana rehetra. Zavatra tokony hitranga amin'ity volana jolay ity, araka ny nohamafisin'ny orinasa ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » EMUI 9.1: Ny vaovao rehetra ho tonga amin'ny telefaona
Ny tsipiriany sy ny fandikan'ny Galaxy Tab A 8.0 (2019) vaovao sy hafa dia efa tafaporitsaka